Lokhu kuphakamisa amathiphu ingcindezi gipotonikam
Umuntu kusengozini yokuthi isenzo ezizungezile sezulu imvelo nokushukunyiswa yangaphakathi. Akumangazi ukuthi ezinye izifo okuyinto esetshenziswa ukukhononda kunalokho ugogo esekhala namuhla intsha, ngisho izingane ngezinye izikhathi abakwazi nijabula futhi wenze umsindo ngenxa yezinkinga zempilo. Ngezicabha nokucindezelwa umehluko. Ilokhu encishisiwe ibizwa ngokuthi "hypotension". Uma uthola ukuthi ngisho emva ukukhathala ezinhle ubuthongo okunempilo akusho hamba uzwa ukuziphathisa isikhathi esengeziwe wathola imali umvukuzi esikhundleni ukuphumula, futhi zonke imisindo okungazelelwe, izibani, ukwelashwa njalo nezingxoxo likudine, futhi into embi ekuseni kwehlela e yokufikelwa, kutuswa ukuba ingcindezi okwalandela. Mhlawumbe unayo hypotension. Lesi sifo kuletha asemrarweni, kodwa kungenzeka ekuqedeni ukuhlupheka, uma ukuba aphinde acabange ngendlela yabo yokuphila.
Umbuso omusha: ukuthi kuphakamisa blood pressure?
Okokuqala, yokuphila asebenzayo. Yebo, ukuhamba, wona uqobo impilo yakho: igazi priletsya ezicutshini ukungakhululeki usehambile. Ekuseni, ushawa umehluko. Zama ukusebenza ngokweqile, uzivikele umsindo uhambe ezizihluphayo ngaphezulu emoyeni opholile. Ingxenye ekhethekile uhlelo lwakho ukutakula kufanele kube ekudleni. Ngakho, hlobo luni imikhiqizo, nokuvusa ingcindezi Kumele kwemukelwe? Kuyaziwa ukuthi abanye babo bayakwazi ukwenza ozdoravlivayusche, futhi ekudleni sokunene siyobathola ukukuvikela ekuhlaseleni umfutho ophansi wegazi. Ungakwazi ukwethemba imithi yolunye uhlobo.
Umuthi herbal: luphakamisa ingcindezi?
Imithi yendabuko yombango izimfihlo impilo. Abantu abaphethwe hypotension, kufanele uphuze uketshezi oluningi. Broths - isiphuzo emangalisayo ekwelapheni. Bhala ukuqoqwa licorice, amakhambi nokunye okufana nokolweni, panatserii ubuka, ezimthende, kuthathwe amagremu ayishumi, futhi pyatigrammovoy ingcosana valerian izimpande, pre-nepepper. Five wezipuni ingxube ilitha sigcwale amanzi, ayise umlilo ethule. Ngemva abilayo thermos ushiye uvuthwe amahora kweshumi. Sidinga ukuthatha amasonto amane for isigamu sehora - imizuzu engamashumi amane ngaphambi kokulala ngemithamo emincane. Abantu abagulayo libonisa akhiphe eleuterokokkovy noma tincture Limonnikova. Extract empandeni segolide, uma wamukelwe zingakapheli izinsuku 10-20 of amaconsi ambalwa ngaphambi kokudla (ngokufanele ingxenye yesine ihora amabili ngosuku), kuyoba nethonya ekwelapheni. Khumbula futhi ukuthi ngaphambi kokufaka noma yimuphi amakhambi abantu ngokuphelele kungavunyelwe ungazinaki izeluleko kadokotela.
Tea evusa ingcindezi?
Kukholakala ukuthi itiye has a ikhono elimangalisayo kwandise ingcindezi yokufuna. Ngokwengxenye lokhu kuyiqiniso. Uma ingcindezi liye lehla kakhulu, inkomishi eqinile itiye eliluhlaza noma emnyama asanda ukwenziwa (ungakwazi ukwengeza uju) ngcono isimo. Ekuseni, kungaba usizo kakhulu inkomishi Ukugunda yekhofi. Ungeqisi it ne isiphuzo - ingozi ukuze uthole ukuqwasha nokukhathala. Maye, ziyadalulwa inganekwane ukuthi ushokoledi kuzokhulisa ingcindezi. Nokho, uma kuyokunikeza isimo sengqondo esiqondile, musa ukuphika ngokwakho injabulo.
Ake sibheke efrijini: luphakamisa ingcindezi?
Ezokudla umuntu uhlushwa umfutho ophansi wegazi, kufanele kube ocebile, okunhlobonhlobo okunempilo, njengoba ngempela, noma yiziphi imenyu enempilo. Okokuqala, kufanele sinake amavithamini C, A, E, R. Faka yakho namafutha kafishi Ukudla, ukolo, ubisi, ubhontshisi, namahalananda, amantongomane, amakhambi, amaqanda, izaqathi. Isipinashi kanye isibindi akuzona ewusizo kuphela kodwa futhi okumnandi. Kuwo wonke la imikhiqizo, ungakwazi ukupheka ezihlukahlukene izitsha. Ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze ukudla. Kuvele ukudla kujabulise futhi injabulo tebuciko - ukuthi kuphakamisa blood pressure kanye nemizwelo.
Izakhiwo ewusizo dandelion impande kanye nokusebenzisa kwayo imithi
Kuyasiza uju ikhekhe ekhwehlela, futhi kusebenza kangakanani kuyinto ekwelapheni?
Blue Lagoon (Cyprus): ezimbili ezikhangayo ngaphansi igama elilodwa
Beautiful isikhumba - ngephupho noma ngokoqobo?
"Kungani ukhethe inkampani yethu?" Impendulo le interview kufanele uzilungiselele
Lokho ephatha endocrinology
Amabhayisikili Mongoose: entabeni Wabasaqalayo kanye nezemidlalo kwabesifazane
Ihhotela Iliada Beach Ihhotela 4 * (Protaras, Cyprus) izithombe kanye nokubuyekeza
Lokuqeqesha amatilosi angabahwebi - kungcono ...